Iloft entle eyi-10 imizuzu ukusuka eMont Saint Michel-WIFI
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguKaren
Kwindlela yabakhenkethi eya kwitheku laseMont Saint Michel, kwindawo yezolimo yasemaphandleni, indawo yethu ene-55 m² ekumgangatho ophezulu isandula ukuguqulwa. Yangoku, eqaqambileyo kwaye igqunywe kakuhle, inendawo enkulu enembono yasemaphandleni, igadi kunye negaraji yokupaka izithuthuthu zakho okanye iibhayisekile. Imizuzu eli-10 ngemoto ukusuka kwindawo yokupaka iMont, imizuzu emi-5 ngeenyawo ukusuka kwindlela eluhlaza kunye nokufikelela ngokulula kwiindlela ezi-4, uya kubekwa ngokugqibeleleyo ukujonga ummandla wethu omhle.
** Ukucoca kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili kwaye ukhuseleko lweendwendwe zethu lubaluleke kakhulu! Kungenxa yoko le nto, ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho ngeli xesha lentlekele ye-Covid-19, samkela iprothokholi yokucoca eqinisiweyo. **
Kuyasivuyisa ukukwamkela kwindawo yethu esanda kuguqulwa, enamagumbi ayo amabini okulala kunye nekhitshi langoku elivulekele kwigumbi lokuhlala / lokutyela, eliqaqambileyo nelinomoya. Ithala elikhulu kumgangatho wokuqala ivuyela ilanga ixesha elininzi mini ngexesha ehlotyeni, kunye netafile yayo zepikniki kunye neembono omangalisayo emaphandleni, (kwakunye imifuno ngobukhulu enuka ukuba unandiphe emizini yakho okanye iti zenu esintu! ) Sithathe inyameko enkulu ukudala indawo yokuhlala ekhululekile kwaye ixhotyiswe kakuhle kwiholide yakho.
Indawo yokuhlala evulekileyo neqaqambileyo, enegumbi lokuhlala elinesofa, isitulo sengalo, itafile yekofu kunye neTV eneFirestick apho uya kuba nokufikelela kwiNetflix, Spotify, Youtube, njl. Kukho indawo yokutyela kunye itafile nezitulo ezine indawo ikhitshi, exhobele kakuhle esine-onti yombane, isitovu igesi kunye extractor hood, kukho njengesicocisi, efrijini ifriji, a Senséo ikofu, uMenzi (iphambi ikofu). Neswekile kubonelelwe) iketile, itoaster, imicrowave nazo zonke izitya neembiza eziyimfuneko. Ukukunceda, sikwabonelela ngetyuwa, ipepile, ioyile yomnquma kunye neviniga, iimveliso zokucoca, iitawuli zeti, iitawuli zokulala kunye neebhafu.
4.99 · Izimvo eziyi-111
Siyimizuzu eli-10 kuphela ngemoto ukusuka kwipaki yeemoto yaseMont Saint Michel. Unokukhetha kwakhona ukuthatha indlela eluhlaza ukuya apho ngeenyawo (malunga neeyure ezi-2 kunye nekota) okanye ngebhayisekile (malunga nemizuzu engama-40.
Kwabo bafuna eminye imisebenzi, ukuhamba ngesanti, ukukhwela umthi, ukukhwela amahashe, ukukhwela iphenyane kunye nokurenta ibhayisekile kukufutshane, kuxhomekeke kwixesha lonyaka.
Ibekwe ngaphezulu kweeworkshops zethu kunye ne-designer boutique, (evulekileyo ngexesha lonyaka), indawo yokuhlala kuphela kwesakhiwo. Sihlala imizuzu eli-15 ukusuka kwindlu kwaye sisesandleni sakho ukuba uyasifuna.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Georges-de-Gréhaigne